I-Tablet isicanucanu singazelele kudingeka ngokuphelele kunoma ubani. Phela, ukudla yesimanje ngokuvamile kubangela lokhu uphawu edabukisayo. Kodwa, qiniseka ukuthi uthole ukuthi yini uhlobo uphawu, futhi lapho ibonakala ngaphambi kokuba uphendule umbuzo yini ukuphuza amaphilisi isicanucanu.
Lesosikhathi lendoda iqala lapho ezizwa esegula kuphela lapho isikhungo esithile zobuchopho uthola amasignali ezifanele kusukela azungeze. Uma "izinsimbi" enjalo enamandla ngempela, isiguli yezimo abhekene livela Gag reflex kulandele ukukhululwa lokuqukethwe esiswini. Uma lezi zimpawu ebuthaka kakhulu, ngakho-ke umuntu bangazizwa isicanucanu ezingemnandi kuphela.
Yini imithi kungasiza?
Kufanele kuqashelwe ukuthi izidakamizwa okuhloswe ngaso abacindezela lokhu uphawu kufanele kuthathwe hhayi kuzo zonke izimo. Kuyancomeka njalo bonana nodokotela wakho kuqala.
Ngakho ukuqeda lesi sici ikakhulukazi ewusizo izindlela ezilandelayo.
Lokhu isicanucanu ithebhulethi yokutholwa kuthinta ezinye izinto eziphila abakhuthele emzimbeni womuntu, okuyizinto neurotransmitters. Ngaphansi kwethonya lokhu izidakamizwa nezindlala salivary ukukhiqiza uketshezi kancane, futhi lacrimal ziphelelwa asebenzayo futhi nezindlala umjuluko. Phakathi kwezinye izinto, lo muthi usebenza lilidlula futhi kwamanyikwe. Izidakamizwa "Aeron" ngokuvamile kakhulu esetshenziswa nesicanucanu esibi ukuvimbela ukuhlanza. Akuvunyelwe ukuba bathathe glaucoma kanye wendlala izimila.
Isicanucanu iphilisi "Validol" kahle ukuqeda izimpawu nekwetfula. Lokhu kungenxa yokuthi isakhi esiyinhloko esebenzayo lokhu ejenti kuyinto menthol. Ngisho e imiyalelo izidakamizwa, kukhona Ukhulumé ukuhlanza nesicanucanu. Nokho, akubona bonke uyazi ngakho, bakubheka njengobuthakathaka imithi inhliziyo kuphela. Thatha leli philisi kufanele kube sublingually, okungukuthi, ukubeka ngaphansi kolimi.
Amaphilisi i isicanucanu "Reglan"
Lesi sidakamizwa kungokwalabo prokenetikam inkanuko imisipha ipheshana wokugaya ukudla, kuhlanganise emathunjini amancane, isisu sphincter ngomphimbo, lapho unabanye la mangqamuzana ka Dopamine futhi acetylcholine. Kuyaphawuleka ukuthi zinyanga isitho ukungasebenzi izimbangela isicanucanu. Ngakho, kokuthatha lesi izidakamizwa, ungakwazi kakhulu ukunciphisa esiswini acid emkhathini kanye ukuqinisa imisipha sphincter ngomphimbo. Ngaphezu kwalokho, lesi sidakamizwa "Reglan" ngakho kuvusa kwezicubu imisipha isisu, ukuthi akhishwe isheshe futhi ubonisa ukudla okuqinile futhi uketshezi emathunjini.
Isicanucanu iphilisi "Anestezin" kungase kuthiye emsipheni amaza. Kuyinto ngenxa yalesi impahla ezifana umuthi ngenkuthalo esetshenziswa ukuze ulwe uphawu edabukisayo. Ngokuvamile ejenti emelelwa iqondiswa e isamba 0.3 mg kathathu ngosuku (umuntu omdala). Izingane zeminyaka 5 sivumelekile ukunikeza izibhebhe 0.2 mg ngosuku.
Natalia Naryshkin: Biography, ngohlu lozalo, izithombe